नेप्से परिसूचक १८८१ पुगेको दिन विकास बैंक, फाइनान्स र होटलको शेयर मुल्य कति थियो ? – Insurance Khabar
नेप्से परिसूचक १८८१ पुगेको दिन विकास बैंक, फाइनान्स र होटलको शेयर मुल्य कति थियो ?
प्रकाशित मिति : ७ पुष २०७६, सोमबार १४:१६
तीन वर्ष अघि साउन १२ गते २०७३ सालमा नेपालको शेयर बजार सबैभन्दा ठुलो उचाईमा पुगेकोे थियो । सो दिन नेप्से परिसूचक १८८१ दशमलव ४५ को विन्दुमा बन्द भएको थियो।
उक्त दिन १५ वटा विकास विकास बैंकको शेयर कारोबार भएको थियो। जसमध्ये ३ वटा विकास बैंकको बजार मूल्य प्रति कित्ता रु १ हजार भन्दा माथि कारोवार भएको थियो।
सो दिन सबैभन्दा धेरै मुक्तिनाथ विकास बैंकको बजार मूल्य १ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो भने माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको बजार मूल्य १ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँमा बन्द थियो र मितेरी डेभलेपमेन्ट बैंकको बजार मूल्य १ हजार १ सय ५० रुपैयाँमा बन्द भएको थियो। देव: विकास बैंकको उक्त दिन सबैभन्दा कममा कारोवार भएको थियो। सो दिन बैंकको बजार मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँमा बन्द भएको थियो।
त्यसैगरी उक्त दिन ९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको शेयर कारोबार भएको थियो। जसमध्ये दुईवटा फाइनान्सको बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको थियो । सो दिन युनाईटेड फाइनान्सको बजार मूल्य ५ सय २४ रुपैयाँ रहेको थियो भने गुडविल फाइनान्सको बजार मूल्य ५ सय १ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सोही दिन नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार ३ वटा होटलको शेयर कारोवार भएको थियो। तीन होटलमध्ये सबैभन्दा धेरै बजार मूल्य आरियन होटलस्को बजार मूल्य ६ सय ३१ रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै उक्त दिन सोल्टी होटलको ४ सय ३८ रुपैयाँ र तारा गाँउ रिजेन्सीको ३ सय ३२ रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको थियो।